Izindaba - Ibhodlela lengilazi elisebenzisekayo
Kube khona amabhodlela engilazi ezweni lami kusukela ezikhathini zasendulo. Esikhathini esedlule, imibuthano yezifundo yayikholelwa ukuthi i-glassware yayingavamile kakhulu ezikhathini zasendulo, ngakho-ke kufanele ibe ngeyabaphathi kuphela futhi isetshenziswe yizigaba ezimbalwa ezilawulayo. Kodwa-ke, ucwaningo lwamuva lukholelwa ukuthi i-glassware yasendulo ayinzima ukuyikhiqiza nokwenza, kepha akulula ukuyigcina, ngakho-ke kuyaqabukela ezizukulwaneni ezizayo. Ibhodlela lengilazi liyisiqukathi sendabuko sokupakisha ezweni lami, futhi ingilazi nayo iwuhlobo lwezinto zokupakisha ezinomlando omude. Njengoba kunezinto eziningi zokupakisha ezitheleka emakethe, iziqukathi zengilazi zisabambe iqhaza elibalulekile ekupakisheni iziphuzo, okungenakuhlukaniswa nezici zokupakisha zazo ezinye izinto zokupakisha ezingeke zikwenze okunye.
Ukusetshenziswa kwengilazi ukwenza iziqukathi zokupakisha kunomlando omude, futhi ukukhiqizwa okukhulu kwezimboni kwamabhodlela engilazi namakani sekuyindaba ecishe ibe yikhulu leminyaka. Njengeziqukathi zokupakisha, amabhodlela engilazi namakani kunezinzuzo eziningi, njengezinto zokusetshenziswa eziningi, amanani aphansi, ukwenza izinto obala okuphezulu nokuqina okuhle kwamakhemikhali. Iyaphefumula, ayishintshi umbala, ingavulwa futhi ivalwe kaningi, futhi ingabuye isetshenziswe futhi isetshenziswe futhi; yize ibuthaka futhi inzima, amabhodlela engilazi namakani bekulokhu kuyizitsha zokupakisha ezibalulekile. Ukusetshenziswa okukhulu kwamabhodlela engilazi namakani sekwenze kancane kancane ukuthi ukusetshenziswa kwawo kabusha futhi kusetshenziswe kabusha kubaluleke kakhulu. Ngokuvamile, ukuvuselelwa kabusha nokusetshenziswa kabusha kwamabhodlela engilazi namakani kulula kunokufaka iziqukathi ezenziwe ngezinye izinto, futhi zidinga ukuhlanzwa ngaphambi kokuphinda zisetshenziswe. Imboni yengilazi isebenzisa ingilazi kadoti esetshenzisiwe kabusha njengezinto zokusetshenziswa, ezinenzuzo ebalulekile kwezemvelo. Amandla angancishiswa. Sebenzisa ama-4% kuye kuma-32%, unciphise ukungcoliswa komoya ngama-20%, wehlise imfucuza yamaminerali ngo-50%, futhi wehlise ukusetshenziswa kwamanzi ngo-50%. Kusukela ekuvikeleni imvelo nokuvikela izinsiza, amazwe emhlabeni jikelele akhuthaza ukusetshenziswa kabusha kwamabhodlela engilazi namakani.
Umthamo wokuvuselelwa kwamabhodlela engilazi uyakhula minyaka yonke, kepha leli nani lokuphinda lisetshenziswe kabusha likhulu futhi alilinganiseki. Ngokusho kweGlass Packaging Association: Amandla alondolozwe ngokusetshenziswa kabusha kwebhodlela lengilazi angenza isibani se-watt esingu-100 sikhanye amahora angaba ngu-4, sisebenzise ikhompyutha imizuzu engama-30, futhi sibuke imizuzu engu-20 yezinhlelo ze-TV. Ngakho-ke, ukuvuselelwa kwengilazi kuyindaba ebaluleke kakhulu. Ukuphinda kusetshenziswe kabusha amabhodlela engilazi konga amandla futhi kunciphise amandla okulahla okulahlwa phansi, okungahlinzeka ngezinto zokusetshenziswa zeminye imikhiqizo, kufaka phakathi amabhodlela engilazi kunjalo. Ngokwe-National Consumer Plastic Bottle Report of the Chemical Products Council yase-United States, cishe amakhilogremu ayi-2,5 billion wamabhodlela epulasitiki asetshenziswe kabusha ngo-2009, ngesilinganiso sokuphinda sisebenze sika-28% kuphela. Ukwenza kabusha amabhodlela engilazi kulula futhi kunenzuzo, ngokuhambisana namasu entuthuko esimeme, kungonga amandla futhi kuvikele izinsiza zemvelo.
Isikhathi Iposi: Aug-27-2020